सुरुङ र रेलमार्गको चर्चाले टोखामा जग्गा बिक्री हुनै छाड्यो, शिवपुरी नजिक आनाको २५ लाख रुपैयाँ - Real Estate Properties in Nepal
Posted by Rashmi Sharma on November 29, 2019
जग्गा धनीः ‘नबेच्ने’ के !
‘सुरुङमार्ग आजको भोलिनै नबनेपनि एक दिन त बन्छ। २/४ वर्ष अघि पछिको कुरा मात्रै हो।’ स्थानीय राजु अधिकारी भन्छन्, ‘सुरुङमार्ग र रेलमार्ग बनेपछि यो ठाउँ व्यापारिक हब हुने पक्का छ। ठूला/ठूला सप्लायर्सहरु यहि बस्छन्। त्यो बेला यहाँ एक आना जग्गाको मूल्यनै करोडौ रुपैयाँ पर्छ भने अहिले कौडीको भाउमा किन जग्गा बेच्ने ?’ उनको भनाईसँग घरजग्गा कारोबारको तथ्यांकले मेल खान्छ।
सुरुङ र रेलमार्गको चर्चाले टोखामा जग्गा बिक्री हुनै छाड्यो, शिवपुरी नजिक आनाको २५ लाख रुपैयाँ को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)
Karunakar Nepali[ 2019-11-26 01:40:07 ]
हा हा हा ! यो सबै जग्गा दलालको भाउ बढाउने मेलो हो। भविष्यमा कुन जग्गा अधिग्रहणमा पर्छ भन्न सकिन्न त्यसैले जग्गा किन्नेहरु बेबकुफ नबन्न मेरो अनुरोध छ। सरकारलाई पनि मेरो अनुरोध छ कि रेल बने पनि नबने पनि त्यो क्षेत्रको जग्गा अहिले नै अधिकरण गरिहालियोस ताकि पछि समस्या नआओस। अनि सुरुङ्ग मार्ग बन्दैमा व्यापार त्यहि छेउको गौडोमा बढ्छ भन्नु पनि भ्रम सिवाय केहि हैन। हो बरु सिमानाको रसुवा क्षेत्रमा चहल पहल बढ्न सक्छ, टोखाको डाँडो मुनि हैन। उदाहरण: अरनिको राजमार्ग खुल्ने बित्तिकै तातोपानी खासा क्षेत्रमा ब्यापार पढ्ने हो न कि भक्तपुरको सल्लाघारीमा !!